News - ဓာတ်ငွေ့ဖိအားပေးသော Regulator ၏အမျိုးအစားနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
၎င်းကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ဗဟိုပုံစံနှင့် Post အမျိုးအစားကိုမတူညီသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအရပုံစံနှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်။ single-stage နှင့် double-stage;
ခြားနားချက်ကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်ခြင်း။ လက်ရှိတွင်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြည်တွင်းဖိအားလျော့ချခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့် Single-phase တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားနှင့် Two-phase hybrid အမျိုးအစားတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် (ပထမအဆင့်မှာတိုက်ရိုက်သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဒုတိယအဆင့်သည်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစား) ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုသံမဏိ ၃၁၆ ဖိအားထိန်းညှိ၊ သံမဏိ ၃၀၄ ဖိအားထိန်းညှိ၊ သံမဏိ 201 ဖိအားထိန်းညှိ၊ ကြေးနီဖိအားထိန်းညှိ၊ နီကယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြေးဝါဖိအားကိုထိန်းညှိ၊
အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါ deflating သို့မဟုတ်ဖိအားလျှော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာ 1. လုပ်ဆောင်ချက်နှေးကွေးဖြစ်ရပါမည်။ အကယ်၍ အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်နှုန်းသည်အလွန်မြန်လျှင်၊ ရာဘာထည်နှင့်ချည်မျှင်များကဲ့သို့သောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရာများမှရော်ဘာထုပ်ပိုးမှုနှင့်ရာဘာဖိုက်ဘာမျှင်ဖိအားများကြောင့်ဖိအားလျော့ချသည့်လုပ်ငန်းခွင်ရှိဓာတ်ငွေ့၏အပူချိန်သိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်။ မီးနှင့်လောင်လိမ့်မည်။ ဖိအားကိုလျှော့ချလုံးဝမီးရှို့သည်။ ထို့အပြင်လျင်မြန်စွာ deflation နှင့်ဖိအားလျော့ချခြင်း၏ရေနံအစွန်းအထင်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ငြိမ်မီးစများကြောင့်လည်း, မီးကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်ဖိအားလျှော့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလောင်ကျွမ်းပါလိမ့်မယ်။
အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါဖိအားထိန်းညှိ deflating သို့မဟုတ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာနှေးကွေးဖြစ်ရပါမည်။ အကယ်၍ အဆို့ရှင်ဖွင့်လှစ်နှုန်းသည်အလွန်မြန်လျှင်ဖိအားထိန်းညှိခြင်း၏အလုပ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းရှိဓာတ်ငွေ့အပူချိန်သည် adiabatic compression ကြောင့်ရော်ဘာထုပ်ပိုးမှုနှင့်ရာဘာဖိုက်ဘာအချည်မျှင်များကဲ့သို့သောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖမ်းဆီးခြင်းကြောင့်အလွန်မြင့်တက်လာသည်။ မီးနှင့်လောင်လိမ့်မည်။ ဖိအားကိုလျှော့ချလုံးဝမီးရှို့သည်။ ထို့အပြင်လျင်မြန်သော deflation နှင့်ဖိအားလျှော့ချသောဆီအညစ်အကြေးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောငြိမ်မီးပွားများကြောင့်လည်း၎င်းသည်ဖိအားလျော့ချခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုမီးလောင်စေပြီးလောင်ကျွမ်းစေပါသည်။
၃။ ဖိအားထိန်းညှိစက်ကိုမတပ်မီနှင့်ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါအဆို့ရှင်ကိုဖွင့်သောအခါကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - ဖိအားထိန်းညှိကိုမတပ်ဆင်မီ၊ ပုလင်းအဆို့ရှင်ကိုအနည်းငယ်အသာပုတ်။ ဖုန်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုဖိအားလျော့ချခြင်းမှကာကွယ်ရန်။ ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါအဆို့ရှင်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ဆလင်ဒါအဆို့ရှင်၏ဓာတ်ငွေ့ထွက်မှုသည်အော်ပရေတာသို့မဟုတ်အခြားသူများကိုမရည်ရွယ်ဘဲဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်လူကိုထိခိုက်စေခြင်းမှတားဆီးရန်မဖြစ်သင့်ပါ။ လေဖိအားထိန်းညှိ၏လေထွက်ပေါက်နှင့်ဓာတ်ငွေ့ရော်ဘာပိုက်အကြားရှိချိတ်ဆက်မှုကိုလေပူဖောင်းပြီးနောက်စွန့်ပစ်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်သံမဏိကြိုးသို့မဟုတ်ဖိအားဖြင့်ဖိအားပေးရမည်။
၄။ ဖိအားထိန်းညှိကိုပုံမှန်စစ်ဆေးရမည်၊ ဖိအား gauge ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးရမည်။ ဤသည်ဖိအားစည်းမျဉ်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ဖိအား gauge ဖတ်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်ပြုမိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဖိအားလျော့ချစက်တွင်လေယိုစိမ့်မှုရှိသည်ကိုတွေ့ရလျှင်သို့မဟုတ်ဖိအားအတိုင်းအတာအပ်သည်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းစနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ပါကအချိန်မီပြန်လည်ပြုပြင်သင့်သည်။
ဖိအားကိုလျှော့၏ 5. အေးခဲ။ အကယ်၍ ဖိအားလျော့ချခြင်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်အေးခဲနေကြောင်းတွေ့ရှိပါက၎င်းကိုအရည်ပျော်စေရန်ရေပူ (သို့) ရေနွေးငွေ့ဖြင့်သုံးပါ။ မီးဖိုသို့မဟုတ်မီးနီကိုမီးဖုတ်ရန်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုပါနှင့်။ ဖိအားလျော့ချပြီးနောက်အပူပြီးနောက်ကျန်ရှိသောရေကိုလွင့်ပစ်ရမည်။
၆။ ဖိအားလျော့ချခြင်းကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားရမည်။ ဖိအားကိုလျှော့ချသောအမဲဆီသို့မဟုတ်ဖုန်နှင့်အတူညစ်ညမ်းခြင်းကိုမပြုရပါ။ အမဲဆီရှိလျှင်၎င်းကိုမသုံးမီသန့်ရှင်းအောင်သုတ်ရမည်။
၇။ ဓာတ်ငွေ့အမျိုးမျိုးအတွက်ဖိအားလျှော့ချရန်နှင့်ဖိအားအတိုင်းအတာများဖလှယ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ရပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်စီဂျင်အတွက်ဖိအားပေးသောအရာအားအက်စီတလင်းနှင့်ရေနံဓာတ်ငွေ့များတွင် အသုံးပြု၍ မရပါ။
post အချိန်: Mar-04-2021